(Yurub) 24 Nof 2020. Chelsea ayaa guul ka soo heshay kooxda Rennes oo ay ku booqatay garoonka Roazhon Park, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, ciyaar qeyb ka aheyd Kulamo ka tirsan heerka Guruubyada ee tartanka Champions League
Daqiiqadii 22-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Callum Hudson-Odoi, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Mason Mount.
Daqiiqadii 87-aad kooxda Rennes ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana ciyaarta 1-1 ka dhigay Sehrou Guirassy, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Benjamin Bourigeaud.
Laakiin daqiiqadii 90-aad Chelsea ayaa heshay goolka guusha kaddib markii uu dheesha 1-2 ka dhigay Olivier Giroud, waxaana caawinta goolkan lahaa Timo Werner.
Ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-2 ay kaga soo adkaatay Chelsea kooxda Rennes oo ay ku booqatay garoonka Roazhon Park, waxayna guushaan ay gaartay Blues ka dhigan tahay inay u gudubtay wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Dhinaca kale kooxda Sevilla ayaa guul ka soo heshay naadiga FC Krasnodar oo ay ku booqatay Krasnodar Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, waxaana goolasha u kala dhaliyay Ivan Rakitic iyo Munir El Haddadi. Naadiga reer Spain ayaa dhankeeda u gudubtay wareega 16-ka ee tartanka Champions League.